Ny Anjerimanontolon’ny Vazimba Teratany ao Aymara, Làlana Iray Mankany Amin’ny Fanampiana Ireo Vondrom-piarahamonina Teratany Ao Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2015 2:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Deutsch, Español
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ao anatin'ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny La Pública, averinay avoaka ireo tantara sasany izay nosoratan'ireo Aymara mpianatry ny Anjerimanontolo ao amin'ny “Túpac Katari” (Unibol), Anjerimanontolon'ny Vazimba Teratany Aymara ao Bolivia . Nandray anjara tamin'ny tetikasa fanaovan-gazetin'olon-tsotra nokarakarain'ny La Pública sy Jaqi Aru ireo mpianatra ireo. Ireo lahatsoratra rehetra ao amin'ny bilaogy dia voasoratra voalohany amin'ny teny Aymara na Espaniola.
Mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'ny Vazimba Teratany Aymara ao Bolivia (Unibol). Sary – La Pública
Mahasarika ireo mpianatra avy amin'ny vondrom-piarahamonina any ambanivohitra, any Altiplano izay mitady fahafahana manohy fianarana ny ao amin'ny “Túpac Katari” (Unibol), Anjerimanontolon'ny Vazimba Teratany Aymara ao Bolivia. Nanana faniriana hatry ny ela ny hianatra amin'ny fianarana ambony mandritra ny fiainany manontolo ireo mpianatra sasany, raha toa kosa ireo hafa namporisihin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hianatra izay rehetra azony atao hanatsarana ny fiainany rehefa tafaverina avy any. Samy manana ny nitaizàna azy sy ny fiainany niainany manokana ny mpianatra tsirairay, maro tamin'izy ireo no voasintona tamin'ny tetikasan'ny bilaogy.
Nosoratan'i Eva Alvares Mamani ity manaraka ity, mpianatra iray momba ny siansan'ny sakafo avy amin'ny vondrom-piarahamonina Chajlaya.
Ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy ahy, miasa mafy ny olona iray mba hanana fiainana tsara; mpamboly ireo mponina any ary raha vao midanika ny masoandro, may mora foana ny hoditra .
Tao amin'io vondrom-piarahamonina io, mpirahavavy telo no nitombo tao, nijanona tao taorian'ny fotoana naha-tompon'ny tany azy ireo. Nanambady izy ireo, samy nahazo vady avy amin'ny vondrom-piarahamonina hafa, ary niteraka. iray amin'izy ireo ny renibeko, izay nanana zanaka fito. Niompy ondry aman'osy ny fianakaviana, ary araka ny voalazan'ny renibeko tamiko, zara raha ampy ny sakafo. Isaky ny Sabotsy, amin'izay kely mba nanànany, nankany amin'ny tsena akaiky indrindra azy izy ireo mba hahazoana zavatra hafa.
Ny raiko no tena mpiaraka betsaka tamin'ny renibeko. Indray andro, nandre momba ny Fiangonana Advantista izy, izay nandehanany isaky ny Sabotsy na dia nanohitra izany aza ny rainy, ny raibeko, satria nankahàla ireo fiangonana rehetra izy. Na izany aza, satria tsy nankatò izy, afaka nianatra namaky teny izy. Na izy na ireo dadatoako dia afaka nianatra satria tsy nisy sekoly tao an-tanàna, sy noho ny fahantran'ny fianakaviana.
Faly ny raiko nandeha tany am-piangonana. Tia nianatra izy ary izay no fomba nahaizany namboly. Fantany fa nisy vondrom-piarahamonina iray akaiky teo izay namokatra voankazo sy legioma, ary izay no fomba nahafahany nandeha nanampy sy nianatra.
Rehefa nanambady ny reniko izy fony 20 taona, vola 150 bolivianos monja no renivola nanànany (eo amin'ny 20 USD ankehitriny raha avadika). Niaraka tamin'izay, nanomboka niasa izy, nanandrana namboly voatabia teo amin'ny taniny tamin'ny voalohany. Nilaza izy fa nahavokatra fito kesika ary izay no nahatonga ireo dadatoako, tamin'ny fahitàna fa namokatra tsara io, nanomboka namboly tsikelikely ary koa nianatra ny mba ho tonga mpamboly.
Amin'izao fotoana izao ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy ahy, misy sekoly mampianatra ankizy manomboka amin'ny taona faha-enina. Mamboly voatabia, salady, tsaramaso ary katsaka ny mponina. Nalefan'ny vondrom-piarahamonina tany amin'ny Unibol aho mba ho afaka hanampy hanatsara ny vokatraeny an-tsaha.
Vitan'ireo mpianatra sasany ny nianatra bebe kokoa momba ny orinasa fanenomana lamba, noho izany afaka manampy ny vondrom-piarahamonina misy azy koa izy ireo. Vehivavy roa mpianatra, Julia Apaza Mamani sy Zelma Mamani Mamani, manoratra momba ny tsy fisian'ireo lehilahy mpianatra amin'ilay sehatra:
Betsaka kokoa ny vehivavy (80 isanjato) noho ny lehilahy (20 isanjato), izay niditra eo amin'ny sehatry ny fianarana momba ny Orinasa Fanenomana Lamba… Taty aoriana, niala ny sasany tamin'ireo lehilahy mpianatra satria toa tsy toan-dry zareo loatra ny fampiharana nifantoka tamin'ny fanenomana. Nahatsiaro ho menatra teo anatrehan'ireo vehivavy izy ireo satria tsy maintsy nanenona tari (lamba), istalla, na chambrita ho an'ny zazakely (salotra ho an'ny zaza vao teraka)… “ny tena siansa” no tian'izy ireo. Noho izany, efa eo amin'ny enim-bolana faha-enina izahay izao, nefa vitsy ireo lehilahy mpianatra.
Hotohizanay ny fizaràna tantara maro avy amin'ireo Aymara mpianatra araka izay anoratan'izy ireo momba ny fiainana diaviny amin'ny fianarana ao amin'io Anjerimananontolo tokana io.